Madda Walaabuu Press: Oromiyaa fii Algeeriyaa: Madaala Seenaa Gabrummaa fii Wal’aansoo Bilisuummaa
Amajjii 01, 2016 | Abbaa Urjii Irraa
Haalli dhiheenya kana Oromiyaa keessatti deemaa jiru onnee ummataa keessatti abdii bilisummaa tan Wayyaanee keessatti naasuu guddoo uumee jira. Fincilli diddaa gabrummaa tiif kaabaa-kibbaan, bahaa-dhihaan diinarratti godhamaa jiru sossooha qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa keessatti argamee hin beeku. Wayyaanee bara diiydamii afuriiiif cabsitee baysitee irreen biyya bulchaa jirtu bu’ura sossoosee jira. Wanni hafe dhiibanii kuffisuu qofa. Kanaas, ka’imman Oromiyaa murannoo ajaa’ibaa tiin itti jiran.